स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा सडक (अडियोसहित)
बजारको कोक, फ्यान्टा भित्रियो तर निर्यात गर्ने वस्तु छैन
प्रकाशित मिति: 2018-11-08
काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनमा आएको झन्डै डेढ वर्ष भयो । देशमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार छन् र ति सरकारको प्राथमिकतामा सडक निर्माणको विषय परेको छ ।
गाउँ गाउँमा डोजरले बाटो त खनिरहेको छ । तर विकासको चक्र उल्टो देखिन्छ ।
गाउँपालिकाको प्राथमिकताको विषयमा कुरा गर्न सम्पर्क गर्दा दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गौरी ठगुन्नाले सुरुमै भन्नुभयो, ‘विकट क्षेत्र हो, नेटवर्कले काम गर्दैन ।’
सुदुर–पश्चिमको विकट क्षेत्रलाई सुगम बनाउन नौगाड गाउँपालिले सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सडक बनेपछि दुर्गम क्षेत्र केही सुगम होला, नागरिकको समृद्धि पनि देखिएला भन्ने स्थानीय सरकारको बुझाइ छ । तर सडक खुलिसकेपछि निर्यात गर्ने बस्तु के त ? त्यसको तयारी भने गाउँपालिकासँग छैन ।
मुगुको खत्याण गाउँपालिकाले पनि सबै वडामा सडक पु¥याउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष उब्जनबहादुर शाहीका अनुसार सडक निर्माणको लागि गाउँपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा झन्डै २ करोड बजेट छुट्याएको छ ।
बाँकी रहेका २ वडामा बाटो पुगेपछि विकास पनि गाउँमा पुग्यो । तर आर्थिक समृद्धि चै कसरी हुन्छ ?
अध्यक्ष शाहीले भन्नुभयो, ‘फ्रुट फार्मिङको कुरा गरिराखेका छौं, अहिले लगभग ४ लाख ६० हजार वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा फ्रुट फार्मिङ गरिराखेका छौं । किसानहरुले व्यवसायिक रुपमा फलफूल खेती गरिराखेका छौं । सम्भाव्यता अध्ययन भइराखेको छ । जडिबुटीतिर पनि योजना बनाइराखेका छौं ।’
सुदुपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमात्रै होइन, सबै वडामा सडक पुगिसकेको प्रदेश नम्बर २ को सप्तरीमा पर्ने सुरुङ्गा नगरपालिकाको पहिलो रोजाई पनि सडक नै बनेको छ ।
सडक पुगेपछि सडककै कारण नागरिकको समृद्धि कति भयो त ? त्यसको हिसाब किताब भने नगरिपालिकासँग छैन । नगरपालिकाका प्रमुख मुक्तिनाथ चौधरीले भन्नुभयो, ‘कृषि बिना केही हुँदैन भन्छन् तर पूर्वाधारमै केन्द्रीत भएका छौं ।’
देशभरी ७ सय ५३ स्थानीय सरकारले विकास घरमा नै पु¥याउने लक्ष्य राखेका छन् । विकासको आधार नै सडकलाई मानेका छन् ।
तर गाउँका सबै वडामा सडक पुगिसकेपछि गाउँ र नगरले कस्तो फाइदा लिन सक्छन् ? स्थानीय तहहरुले छलफल समेत गरेका छैनन् । यो चिन्ताको विषय हो भन्नुहुन्छ, अर्थविद् केशव आचार्य ।
सडक पुगेपछि बजारको उत्पादन गाउँसम्म लैजान सहज भएको छ । तर, बजारबाट कोक फ्यान्टाका बोतल पुग्छन् तर गाउँबाट दुध बजार झर्दैन । तरकारी बोकेर फर्किनुपर्ने गाडी रित्तै बजार झर्छन् ।
हिजो दुईघण्टा हिड्न सजिलो मान्नेहरु अहिले दुईपाइलामा पनि गाडी चढ्न थालेका छन् । सडकले सुविधा दियो तर स्थानीय सरकार उत्पादनमा केन्द्रीत नहुँदा गाउँमा विकासको उल्टो चक्र देखिन्छ । सडकले आम्दानी भन्दा खर्च बढाएको छ ।